Duck.News - Myanmar's Latest Top News
Myanmar's Latest Top 10 News
| 4h 35m ago
| 6h 0m ago
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံရေး ဖြစ်လာနိုင်သလား - BBC News မြန်မာ
"အာဆီယံ အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံနိုင်ရေး၊ စစ်ကောင်စီနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ဆုံနိုင်ရေး ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်ပေါ့ ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ တရားဥပေဒရင်ဆိုင်နေရဆဲ ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရဆဲ လူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အတွက်တော့ ကန့်သတ်ချက်ရှိတယ်၊နောင်မှာ ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်ဆိုတာကတော့ နိုင်ငံရေးမှာ ဘာမှ ကြိုပြောလို့ မရဘူးလို့ " စစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
| 8h 7m ago
Myanmar Celebrity, Myanmar Entertainment, Myanmar Celebrity Gossips, Myanmar Movie, Myanmar Actor
| 8h 36m ago
| 10h 27m ago
အဖွဲ့အစည်းတရပ်ဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်ဖြစ် ပျက်သုဥ်းတော့မယ်၊ အုပ်ချုပ်ပုံစနစ် ပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင် ပြသလာတဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေထဲမှာ ထင်ရှားသိသာတဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေကတော့ ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ အင်အားဆုတ်ယုတ် ချည့်နဲ့လာခြင်း၊ မှန်ကန်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာစက် မသက်ရောက်နိုင်တော့တာမို့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိခြင်း၊ ရာဇဝတ်မှု ထူပြောလာခြင်း၊ စီးပွားရေး ယုတ်လျော့ပြိုပျက်ခြင်း၊ အစာရေစာ ရှားပါးပြတ်လပ်လာခြင်း၊ အနာရောဂါ…
| 16h 8m ago
| 22h 12m ago
Drug arrest at Mae La Refugee Camp - Karen News
Mae La Refugee Camp securities and Thai authorities arrested two men on March 15 for allegedly using narcotics. Security officials in charge at the Mae La Refugee Camp told Karen News that one of the men, Saw Kyaw Eh, 28, had eight ya ba (amphetamine) tablets on him when he was detained by camp authorities, …
Interview | China’s Complicated Game in Myanmar
Veteran journalist Bertil Lintner talks to The Irrawaddy about China’s goals in Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi’s future role and how the military might be defeated.
| 1d 21h ago
Christopher J. Walker reflects on how, when people work together,asolution might be found to the military repression in Myanmar.